Bible Mu Nsɛm Yakob Kɔ Haran - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
WUNIM nnipa a Yakob ne wɔn rekasa wɔ ha no? Bere a otwaa kwan nna pii no, Yakob bɛtoo wɔn abura bi so. Na wɔrehwɛ wɔn nguan. Yakob bisae sɛ: ‘Mufi he?’
Wɔkae sɛ, ‘Haran.’
Yakob bisae sɛ, ‘Munim Laban?’
Wobuae sɛ, ‘Yiw. Hwɛ, ne babea Rahel ne ne nguan ni.’ Wuhu Rahel sɛ ɔreba?
Bere a Yakob huu Rahel ne ne wɔfa Laban nguan no, okopirew ɔbo no fii abura no ano na nguan no atumi anom nsu. Afei ofew Rahel ano na ɔkyerɛɛ no nipa ko a ɔyɛ. N’ani gyei na ɔkɔɔ fie kɔka kyerɛɛ ne papa Laban
Laban ani gyei sɛ Yakob aba wɔn nkyɛn. Na bere a Yakob kae sɛ ɔbɛware Rahel no, Laban ani gyei. Nanso, ɔka kyerɛɛ Yakob sɛ ɔnyɛ n’afuw mu adwuma mfe ason na ɔde Rahel ama no. Esiane sɛ na ɔdɔ Rahel kɛse saa nti Yakob yɛɛ eyi. Nanso bere a ayeforohyia bere no dui no wunim nea ɛbae?
Laban de ne babea panyin Lea mmom na ɛmaa Yakob. Bere a Yakob penee so sɛ ɔbɛyɛ adwuma ama no mfe ason bio no, Laban nso penee so sɛ ɔde Rahel bɛma no sɛ ne yere. Saa bere no Onyankopɔn maa kwan ma ɔbarima waree nea ɛboro ɔyere biako. Nanso ɛnnɛ de, sɛnea Bible kyerɛ no, ɛsɛ sɛ ɔbarima nya ɔyere biako pɛ.
Ababaa a ɔwɔ mfonini no mu no yɛ hena, na dɛn na Yakob yɛ maa no?
Dɛn na Yakob pɛe sɛ ɔbɛyɛ na ama wanya Rahel aware?
Bere duu sɛ Yakob bɛware Rahel no, dɛn na Laban yɛe?
Dɛn na Yakob penee so sɛ ɔbɛyɛ na wanya Rahel aware?
Kenkan Genesis 29:1-30.
Bere a Laban daadaa Yakob mpo no, ɔkwan bɛn so na Yakob kyerɛe sɛ ɔmpɛ basabasa, na dɛn na yebetumi asua afi mu? (Gen. 25:27; 29:26-28; Mat. 5:37)
Dɛn na ɛwɔ nea Yakob yɛe no mu a ɛma yehu sɛ ɛsono ɔdɔ pa na ɛsono ahoɔfɛ dɔ? (Gen. 29:18, 20, 30; Nmd. 8:6)
Mmea baanan bɛn na wɔbɛkaa Yakob fifo ho a akyiri yi wɔwoo mmabarima maa no? (Gen. 29:23, 24, 28, 29)